Alabama Football Team's Anti-Gravity Treadmill bụ Star nke Ụlọ Ọrụ Ọhụrụ: Ọdịnihu nke Mweghachi mmerụ ahụ - Blọọgụ ahụike 2022
Alabama Football Team's Anti-Gravity Treadmill bụ Star nke Ụlọ Ọrụ Ọhụrụ: Ọdịnihu nke Mweghachi mmerụ ahụ
Inweta aha asọmpi mba BCS abụọ na-esochi bụ nnukwu ihe. Na maka ndị otu egwuregwu bọọlụ nke Mahadum Alabama Crimson Tide, ọ pụtara nnukwu nkwalite ụlọ ọrụ nke gụnyere ọnụ ụlọ dị nde $9, 37, 000 square ụkwụ, ọdọ mmiri hydrotherapy nke a kwadebere na mmiri mmiri, na ọbụna ihe mgbochi ike ndọda maka mgbake ngwa ngwa site na mmerụ ahụ.
Jeff Allen, UA Assistant Athletic Director for Sports Medicine, kwuru na mmemme ahụ zụtara onye na-ahụ maka mgbochi ike ndọda otu afọ gara aga iji nyere NFL na-agba ọsọ ugbu a Eddie Lacy mgbake site na mmerụ ahụ ụkwụ, TideSports.com kọrọ.
"Anyị enweela nke a otu afọ ugbu a. Anyị zụrụ ya mgbe Eddie Lacy nwere mmerụ ụkwụ ya, "Alen kọwara.
"Ihe nke a na-enye anyị ohere ime bụ ịkpọrọ nwoke na-agba ọsọ ha na pasent dị ala nke arọ ahụ ha. N'echiche, ọ bụrụ na ị na-atụ kilogram 200, enwere m ike itinye gị ebe a ma tinye nke a iji mee gị ihe ọ ga-adị ka. na-agba ọsọ na 50 pound."
Ndị na-emepụta ngwaọrụ ọzụzụ a ga-eme n'ọdịnihu na-ekwu na ndị ọkachamara na-eme egwuregwu yana ndị Olympia enweela uru ya gụnyere oge mgbatị ahụ dị mkpụmkpụ. Woodway Treadmills ọbụna na-ekwu na G-Trainer ya nwere ike inye aka mee ka ndị na-egbu mgbu dị mfe ịbanye n'ụkwụ prosthetic ọhụrụ.
A na-edobe onye ọrịa ahụ n'ime ụlọ afụ nke gbara ya gburugburu ma na-ekpughe elu ahụ. Ikuku nrụgide na-ebuli onye ọrụ elu, na-eme ka ọ na-eche ihe dịka pasent 20 dị ọkụ. Ndị ji ya mee ihe na-atụnyere mmetụta ahụ na-agba ọsọ na mmiri ma ọ bụ na-ese n'elu mmiri.
Ọ bụ ezie na ị gaghị atụ anya ịhụ ihe ọ bụla mgbochi ike ndọda n'ebe mgbatị ahụ dị n'ógbè gị n'oge na-adịghị anya, ọganihu nkà na ụzụ dị ka nke a bụ ọganihu nabatara ndị ọkachamara ahụike na ahụike.